တောင်ရောက် မြောက်ရောက် ( ၁ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » တောင်ရောက် မြောက်ရောက် ( ၁ )	15
တောင်ရောက် မြောက်ရောက် ( ၁ )
Posted by တောတွင်းပျော် on Jun 26, 2016 in Creative Writing, My Dear Diary | 15 comments
ထားဝယ် သရက်ချောင်းမြို့ နယ် ဗျတ်ဝိသားရွာ ကျောက်ပြားတောင်က ကျိုက်ထီးရိုါ်ဘုရား
ဗျတ်ဝိသားရွာက မြေသားမြို့ ရိုးဟောင်း အရှေဗ့ အနောက် အရှည် ၂မိုင် တောင်မြောက် ၁ မိုင်
ဗျတ်ဝိသားရွာထဲမှ မြေသားမြို့ ရိုးဖြတ်ပိုင်း
ထီးခီးနယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးစခန်း ( ထားဝယ် )
မီးကျိုးမောင်းပြတ် သံချေးတက် ( ထီးထကုန်း )
မိုးကျလာလို့ခရီးအသွားအလာပါးသွားတော့…
တနွေတွင်းလုံး ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့သွားလာခဲ့ တဲ့ နေရာတွေက ရိုက်ထားခဲ့ သမျှတွေ ပြန်တင်မယ်
တစ်ချို့ နေရာတွေက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီး လူသူအသွားနည်းတဲ့အရောက်
နည်းတဲ့နေရာတွေဖြစ်လိမ့် မယ်ထင်တယ်။
ပုံတွေကတော့taw twin pyaw facebookမှာတင်ခဲ့ ပြီးသားပုံတွေပါ။
ဂျစ်စူ says: အွန်
တောတွင်းပျော် says: အပိုင်းပိုင်းလာမယ် ဆရာစူ..
ကံကြုံရင် ဆရာစူ့ အတွက် စကီပုံတွေ ပါကောင်းပါရဲ့Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6346
ဂျစ်စူ says: ဟင်း
Thint Aye Yeik says: .ဖွေးဖွေးလည်း မပါဘူး။ ဟိုကို ပြန် သွားကြည့်နေတာပဲ ကောင်းတယ်…. http://www.google.com.mm/search?hl=my&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=609&q=phway+phway&oq=phway+phway&gs_l=img.3…
တောတွင်းပျော် says: အနော်လည်း ရှယ်ယာပါ ပါရစေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1294
uncle gyi says: ကြည့်ရသလောက်သစ်ကြီးဝါးကြီးသိပ်မတွေ့ရဖူးလားလို့ကုန်ပြီနဲ့တူတယ်
တောတွင်းပျော် says: ရေး-ထားဝယ် / ထားဝယ်-ထိုင်းနယ်စပ်ထီးခီး လမ်းတစ်လျှောက်လုံး
သစ်ပင်ကြီးတွေ တစ်ပင်မှ မတွေ့ ရတော့ ဘူး။
နယ်စပ်လမ်းက ပိုဆိုးတယ်။ ကရင်နယ်မြေထဲမှာ
တဖက်က ထိုင်း ကန်ချနာဘူရီဖက်လမ်းပေါက်တော့ 
ဟိုတုန်းက နယ်မြေကလည်းမငြိမ် ကိုယ့် နယ်မြေနဲ့ ကိုယ် သူတစ်ပါးလာမလုခင်
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: ဓါတ်ပုံလေးတွေတော်တော်လှတယ်ဗျ…
. မြေသားမြို့ ရိုးဟောင်းလို့ပြတဲ့ပုံမှာ မြို့ရိုးနှစ်ခုပြိုင်နေသလိုပဲနော
တောတွင်းပျော် says: မြေသားကိုတူးပြီး ရိုးဖို့ လိုက်တာ။
ပုံရဲ့ ဘယ်ဖက်ခြမ်းကို ဖို့ တာ။
ညာဖက်မြေပြင်နဲ့ပြန့် နေပြီး အလယ်ကမြေတူးထုတ်လိုက်တဲ့ နေရာက
အောင် မိုးသူ says: ရှပ်သီခြောက် ဝယ်ခဲ့ပါဦး စားချင်လို့
တောတွင်းပျော် says: ဆတ်သားခြောက်တော့ရှာမတွေ့ ခဲ့ ဘူး။
စုံဆင်ဖျားဆိုတဲ့ ရွာမှာတော့မျောက်အူချေးခါးဟင်း စားလိုက်ရတယ်။
အောင် မိုးသူ says: ဆတ်သားခြောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူး ရှပ်သီခြောက် ၊ ရှပ်ခြောက်ကို ပြောတာ။ ထားဝယ် ၊ မြိတ်က ထွက်တဲ့ ဂုံးကောင်လေးတွေကို တုတ်ကလေးနဲ့ သီထားတာ။ ပင်လယ်စာကိုပြောတာ။
တောတွင်းပျော် says: ဆောတီးပါ ကိုမိုးသူ ..
ဆတ်သားခြောက်ကိုပြောနေတယ်မှတ်လို့..
ကိုမိုးသူ ပြောတဲ့ရှပ်သီခြောက်ဆိုတာ ခုမှပဲကြားဖူးတယ်။
တောတွင်းပျော်က ခရီးသွားရင် တောတွေချည်း ဝင်ဝင်တိုးနေတတ်တော့ 
ပင်လယ်စာတွေ သတိမထားလိုက်မိဘူးဗျာ Was this answer helpful?LikeDislike 12395
မမချွိ says: တောတွင်းပျော် နာမည်နဲ့ လိုက်ပါ့ဗျာ။
တောတွင်းပျော် says: တောမြင်ရင် တိုးချင်နေတာကြီးကိုး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.